Ndeipi iyo Avhareji Mutengo weWiricheya? Ngani...
Dana ikozvino kuti uwane mamwe mashoko (626) 581-2235
* Ongorora: Chati yemitengo iri pamusoro inosanganisira zvemitengo uye nehuremu ruzivo rwakavakirwa pavhareji mutengo webhuku mavhiripu, iri harisi chero chati yepamutemo yemitengo yemhando ipi neipi yechigaro.
Uri mumusika we chigaro chitsva? Kana zvakadaro wakanyatsoona kudhura kwedzimwe idzi zvigaro. Iwe uri pamwe uri kushamisika kuti kana vagadziri muiyi indasitiri vari kungo cherera kumusoro kwavo mitengo kana kana iyo mavhiripu chaizvo inodhura zvakanyanya sezvavanoita kugadzira. Zvakanaka chokwadi chisina kunaka ndechekuti icho chidiki pane zvese zviri zviviri. mavhiripu inogona kuwanikwa pamhando dzakasiyana dzemitengo inotangira panzira kubva pamazana emadhora kusvika chiuru chimwe. Zviripachena yakanaka unhu wiricheya irikudhura zvakanyanya kupfuura iro zana remadhora-chikamu.
Mutengo we Chinyorwa Wiricheya
Izvo zvese zvinoenderana nehuwandu hwechengetedzo iyo yakaenda mukugadzira chigaro. Iyo zana remadhora modhi ingangodaro isina kutarisirwa kune yaigona kuve yakaburitswa mumusangano wegungano. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero zvakakosha zvimwe mavhiripu inodhura zvakanyanya sezvavanoita. Iyo mavhiripu yakaitwa nehanya ingangodaro yakaitwa nemaoko uye ngatizvitarisei, basa remaoko haridhuri. Hatisi kana kutaura nezvazvo tsika akaita mavhiripu pano uye mutengo wemacheya akagadzirwa nemaoko unogona kusvika pamitengo yezviuru zvinoverengeka.
Mitengo mavhiripu Kuenzaniswa Nezvimwe Zvigaro
Sezvaungatarisira, vashoma vanhu vanonyatsofunga nezve zvigaro kusvikira vachida imwe. Izvi zvinowanzo kukonzera kushushikana kukuru kune mumwe munhu anga apfuura chiitiko chakaipa kwazvo uye iye zvino anofanira kuvimba nechinhu chekunze che kufamba. Zvakaremara zvakanyanya zvinoda simba mavhiripu izvo zvakatodhura imwe mari. Midziyo iyi inowanzo kubva pamadhora 2000 kusvika $ 15000. Izvo zvakanyanya kufambira mberi tekinoroji inopinda muchigaro chevhiri iri, iyo inonyanya kukosha mutengo uri. Izvo zvakakosha kuti unzwisise zvaunoda chaizvo usati watenga cheya nekuti inopa yakanyanya yakajeka bracket yemubhadharo iwe kuti utarise paunenge uchitenga.
Kutenga Nhungamiro | eBay
Mutengo weSachigaro - Ruzivo rweVatengi
Dzimba: Kuroja kana Kutenga?
Ndokumbirawo zadza fomu pazasi kuti ugamuchire ruzivo maererano nekubvunza kwako. Unogona kutipa runhare ku 626-581-2235, kana ndapota takura nesu patinopindura kubvunza kwako.
Zvakawanda Sei Zvinotora Kugadzirisa Wiricheya Mota?
Kuwana Inishuwarenzi Kubatsira Kuvhara Mutengo weKumba Zvishandiso Zvekurapa
Kubhadhara Simba reMagetsi Wiricheya